Dowladda oo raashin gargaar ah geysay Jalalaqsi & wasiirro halkaas tegaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kolonyo gaadiid ah oo sida raashin gargaar ah gaarsoosay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, halkaasoo 3-dii bishaan laga saaray Alshabaab.
Gaadiidkan sida raashinka gargaarka ah oo ka kooban ilaa 8 baabuur, ayaa shalay gaaray degmada Jalalaqsi, waxaana la sheegay in maalinta Jimcaha ah loo qeybin doono dadka ku dhibaateeysan Jalalaqsi.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, C/llaahi Goodax Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa iney gaaraan degmada Jalalaqsi, si ay goob joog uga noqdaan qeybinta raashinkaasi, islamarkaana kulamo ula qaataan maamulka iyo bulshada ku nool degmadaasi.
Dhanka kale gudoomiyaha degmada Jalalaqsi, Maxamed C/lle Fiidoow oo ka hadlay ammaanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ka hortageen falal amnidarro ah oo ay soo abaabuleen Al-shabaab, isagoo ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmadaasi iney gacan ka geeystaan la dagaalanka Al-shabaab
Degmada Jalalaqsi ayaa ka mid ah degamooyinka Alshabaab looga saaray howlgalka “Badweynta Hindiya”, waxaana ciidamada qabtay oo ka koobada kuwa Soomaaliya iyo AMISOM ka baxeen magaalada Jowhar.